17 Arimood Oo Yaab Leh Oo Ninku Sameeyo Marka Uusan Kalsooni Ku Qabin Gacalisadiisa - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»17 Arimood Oo Yaab Leh Oo Ninku Sameeyo Marka Uusan Kalsooni Ku Qabin Gacalisadiisa
17 Arimood Oo Yaab Leh Oo Ninku Sameeyo Marka Uusan Kalsooni Ku Qabin Gacalisadiisa
Inaad xiriir la yeelatid nin shaki badan waa walaac iyo walbahaar ku noolaasho sababtoo ah waqti kasta waa kurbo, shaki iyo muran joogto ah.
Hoos ka akhriso calaamadaha lagu garto in ninka uu qabo qabo kalsooni daro weyn.
1. Si daran ayuu u maseeraa markuu arko adigoo nin la hadlaayo xittaa ma hubsado in qofkaas uu noqon karo qofaa walaalo tihiin
UGAAR AH DUMARKA: 4 Calaamadood Oo Lagu Garto In Ninka Uu Yahay Mid Haweenka Ugacan Qaada
Afar Arrimood Oo Waajib Kugu Ah Inaad Sameyso Haddii Aad Rabto Jacayl Waara
2. Wuxuu had iyo jeer kaa doonayaa inaad u xaqiijiso inaad jeceshahay isaga. Waxaa joogto noqota su’aasha ah “Ma I jeceshahay”? Kalsooni ma qabo qofka lamaanahaaga ah xittaa isaga oo og inaad jeceshahay ayuu ku weydiinayaa inaad jeceshahay maalin walbo.
3. Wax kasta oo aad sameyso wuxuu u maleeyaa inaad ulakac u sameysay.
4. Wuxuu eegaa mar walbo barahaaga bulshada.
5. Wuxuu mar kasta ku hanjabaa furiin inkastoo xaqiiqdii uusan rabin inuu ku furo ama aad kala tagtaan.
6. Wuxuu mar kasta baaraa taleefankaaga
7. Wuxuu mar kasta kugu eedeeyaa inay jiraan waxyaabo aad qarineyso.
8. Mar kasta wuxuu soo hadal qaadaa lamaanahaagi hore sababtoo ah wuxuu u maleeyaa inuu halis ku yahay isaga.
9. Kuma farxo marka qof aanan isaga ahayn uu ku dareensiiyo wanaag sidaa darteed wuxuu isku dayaa ku liido markaad wanaag dareemeyso.
10. Wuxuu rabaa waqtigaaga firaaqada oo dhan inaad isaga la joogto.
11. Ma xamili karo isaga dhaleeceyn wax ku ool ah.
12. Wuxuu isku dayaa inuu kuu tilmaamo wax kasta oo aad sameyneysid. Xittaa wuxuu rabaa inuu kuu dooro dharka aad xirato.
13. Wuu maseeraa markaad waqti la qaadatid saaxiibadaa.
14. Had iyo jeer wuxuu kugu eedeeyaa inaad rabto inaad khiyaameyso isaga.
15. Had iyo jeer wuxuu doonayaa inuu lahaado ereyga ugu dambeeya.
16. Wuxuu had iyo jeer jecelyahay in la faaniyo.
17. Mar kasta wuxuu ku weydiiyaa meeshaad joogto.
Wax ka ogoow faa’idooyinka caafimaad ee Saliid Macsarada
Dabinada Guurka Ee Ay Lamaanayaasha Farxadda Heysta Iska Ilaaliyaan
The health benefit of brushing your tongue is priceless
Maxaa ka jira in shaqadu burburinayso guurkaaga?
10 Waxyaabood Oo Ninka Wanaagsan Uu Ka Ilaaliyo Gacalisadiisa